N'èzí Ikanam ngosi elekwasị anya ọzọ na mmezi, nke nwetara ifufe na mmiri ozuzo. Ya mere, anyị kwesịrị ịhọrọ ihe ka mma, ma ugbu a, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ngosi ọkụ na-akpata àgwà ọjọọ nke ngosi ọkụ nke na-abụghị ezigbo usoro nchebe.
/Zọ / nzọụkwụ
Ọtụtụ ndị ahịa edoghị anya n'okwu ahụ mgbe azụrụla ngosi ngosi n'èzí ma ghara ị attentiona ntị na nkwa dị mma.
Ime ụlọ na n'èzí ikanam ngosi abụọ dị iche iche nke na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi, nke a chọrọ maka n'èzí Ikanam ngosi kwesịrị ị paya ntị karị n'èzí.
Biko mara maka isi ihe ndị a:
1. A na-etinye ihe ngosi maka n'èzí, mgbe mgbe na anyanwụ na mmiri ozuzo, ikuku na mkpuchi ájá, ebe ọrụ na-adịghị mma. Ngwaọrụ elektrọnik ga-adị mmiri mmiri ma ọ bụ nwee nnukwu mmiri mmiri ga-eme obere oge ma ọ bụ ọkụ, na-ebute ọdịda ma ọ bụ ọbụlagodi ọkụ, na-ebute mfu.
2. Ngosipụta nwere ike kpatara ọkụ ọgụ ike ọgụ ndọta.
Ọnọdụ ikuku na-agbanwe nke ukwuu. Ngosipụta ahụ na-arụ ọrụ n'onwe ya iji mepụta ụfọdụ okpomọkụ, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị oke oke na ọkụ na-adịghị mma, sekit agbakwunyere nwere ike rụọ ọrụ na-adịghị mma, ma ọ bụ ọbụna ọkụ, nke mere na usoro ngosi ahụ enweghị ike ịrụ ọrụ nke ọma.
3. Ndị na-ege ntị, ihe ọhụụ chọrọ, obosara nke ọhụụ chọrọ, mgbanwe dị ukwuu na gburugburu ebe obibi, ọkachasị, nwere ike ịpụta ìhè anyanwụ.
Maka ihe ndị a dị mkpa dị n'elu, a ga-emerịrị ngosipụta n'èzí n'okwu ndị a:
Nke mbu, aru aru na ulo a gha aghaghi idi nchikota aka ya.
Ihuenyo ga-adị na ezigbo usoro mmiri, ozugbo ihe omume mmiri nwere ike ịhapụ nke ọma. Wụnye ihe nchebe àmụmà na ngosipụta na ụlọ. Ihe ngosi na nkpuru iji kwado ezigbo ala. Na nkwụsị nke ala bụ ihe na-erughị 3 ohms, àmụmà kpatara site na nkwụsị nke nnukwu ugbu a.
Nke abuo, wunye igwe ikuku ikuku, nke mere na ihuenyo n'ime otutu di n'etiti -10 ℃ -40 ℃. Ọzọkwa arụnyere axial ofufe n'azụ n'elu ihuenyo, ewepu okpomọkụ.
Jiri usoro ọrụ nke -40 ℃ -80 ℃ dị n'etiti mgbawa ihe eji arụ ọrụ iji mechie oge oyi dị oke ala ka ngosipụta ahụ ghara ịmalite.
N'ikpeazụ, iji hụ na gburugburu ebe obibi n'ihe banyere ịdị ogologo ogologo anya, ị ga-ejirịrị ọkụ na-enwupụta ọkụ na-enwu gbaa.
Nhọrọ mgbasa ozi na-ahọrọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ, agba dị ọcha, nhazi na-agbanwe agbanwe yana ihe karịrị 100,000 awa ndụ. Ihe nkwakọ ngwaahịa dị n'èzí nke ihe ngosi ihe ngosi bụ ihe kachasị ewu ewu na mkpuchi n'akụkụ n'akụkụ tube ahụ, akara silicone, enweghị mgbakọ ígwè. Ọmarịcha ọdịdị ya mara mma, na-adịgide adịgide, yana mgbochi anwụ, uzuzu, mmiri, okpomọkụ dị elu, ihe ise “atụmatụ” ise.